Faaidooyinka Caafimaad Ee Babayga - Daryeel Magazine
Faaidooyinka Caafimaad Ee Babayga
Akhristaayasha qiimaha badan ee ku xiran daryeelmagazine.com waxaan halkaan idin kula wadaagaynaa qaar ka mid ah faaidooyinka caafimaadka ee babayga.
1. Waxaa uu wanaagsansan yahay Kaadi macaanka: inkastoo Babaygu uu macaan yahay hadana waxaa uu la dagaalama cudurka sonkorowga ama kaadi macaanka, dadka aan qabin cudurkaan si ay uga hortagaan waxay badsan karaan cunista babayga.
2. Wuxuu wanaajiyaa shaqada hab dhiska difaaca cudurrada jirka: Haddaad doonayso in aad ka shaqaysiiso hab-dhiska difaaca cudurrada ee jirkaaga waxaad isticmaasha oo aad cuntadaada si joogto ah ugu dartaa babayga.
Babayga waxa ku badan Vitamin C-ga, kaasoo si fiican uga shaqaysiiya hab-dhiska difaaca jirka, uuna saamaxa in cudurrada iyo waxyaabaha waxyeellada leh ee jidhka dibada kaga imanaya uu si fiican isaga difaaco.
Akhriso: 10 Faaido oo laga helo cunista rumaanka
3. Babaygu wuxuu difaac u yahay araga indhaha: wuxuu ka difaaca indhaha inay aragti ahaan daciifaan waxaana laga helaa babaygu antioxidant vitamins A, C, iyo E. Sidoo kale waxa uu ka koobanyahay carotenoids lutein iyo zeaxanthin kuwaaso ilaalinaaya inay dhaawacyo ku yimaadaan energyga loo yaqaano blue lightka kaaso inta badan ay ku yimaadan dhaawacyo daciifiya aragtida indhaha.
4. Waxaa uu ka hortagaa xanuunka kala goysyada jirka: Arthritis (riixa) waa tibaaxda guud ee lagu tilmaamo xaalado badan ee xanuun ee qabto kala goysyada (ruugagga) iyo lafaha. Babaygu waxaa ku badan Vitamin C-ga oo wax weyn ka tara difaacida xanuunka kala goysyada jirka. Daraasad lagu dabaacay joornaalka Annals of the Rheumatic Diseases ayaa iftiimisay dadka aan badsan cuntooyinka laga helo Vitamin C-ga inay aad uga nugul yihiin inuu ku dhaco cudurka Arthritis.
5. Waxaa uu yareeyaa xanuunka dhiiga caadada: Dumarka la kulma xanuunka badan xiliga dhiiga caadada waxaa haboon inay badsadaan cunista babaayga, sababtoo ah waxaa ku jira maado enzyme ah oo la yiraahdo papain taasoo yareysa xanuunka waqtiga caadada.
Akhriso: 10 Siyaabood oo loo yareeyo xanuunka dhiiga caadada
6. Waxaa uu hagaajiyaa dheefshiidka: babaygu waxaa u wanaagsanyahay dheefshiid xumada iyo ciladaha caloosha, sida calool istaaga iyo wixii la mid ah.
7. Waxa uu daaweeyaa dhaawacyada jirka: Saynisyahano ruush ah ayaa ogaaday in antioxidants iyo natural enzymes-ka ee laga helo babaygu ay yihiin kuwo dabiici ah isla markaana daawo u yihiin misna ay si deg deg ah u bogsiiyaan qofka markii uu gubto ama ay gaaran dhaawacyo kale.
Sidoo kale babaygu waxaa ku jira vitamino dhowr ah, sida Vitamin C, Vitamin E, iyo beta carotene kuwaas oo dhamantood gacan ka geysta yareynta caabuqa kasoo baxa jirka waana lagu daweeya.
8. Waxaa u caawiyaa koritaanka timaha: babaygu waxaa u ilaaliyaa caafimaadka timaha, sidoo kale waxaa uu timaha ka dhigaa kuwo dhalaalaya waxaana uu la dagaalamaa qolofta (dandruff).
9. Waxaa uu ka hortagaa calaamadaha gabowga: Babaygu waxaa uu maqaarka jirka ka ilaaliya calaamadaha gabowga sababtoo ah waxaa u hodan ku yahay vitamin C, vitamin E iyo antioxidants kuwaas oo ka hortaga laalaabka wejiga iyo calaamadaha kale gabowga.
10. Waxa uu ka difaac u yahay Kansarka: babayga oo uu aad ugu badan yahay maadada Antioxidant iyo faytamiinada waxa uu hoos u dhiga sida ay muujiyeen daraasado badan oo laga sameeyey khatarta cudurka Kansarka.
Qiimaha Caafimaad Ee Saliida Dhaga Yaraha Iyo Sida La Iskugu Daaweeyo Waxtarka Caafimaad Ee Qorfaha Faaidooyinka Dahabiga Ah Ee Muuska Cagaaran